Tena akaiky ny Fetin'ny Lohataona Sinoa, manidina avy eto Aostralia i Johan sy Jason. Fotoam-pahavaratra izao any Aostralia izao, manao T-shirt fohy fohy izy ireo ao anaty palitao matevina. mitondra fanomezana mafana be ho antsika izy ireo, tetik'asa lehibe io! Nandritra ny telo andro sahirana nijanonany teto, dia nifanakalo hevitra lalina tamin'ny antsipiriany izahay momba ny ...
Tsy nampoizina, ny taona 2020 dia taona miavaka toy izao, ny COVID-19 dia miparitaka erak'izao tontolo izao hatramin'ny fiandohan'ny taona. Ny Sinoa rehetra dia niaina festival tamin'ny lohataona nahagaga, tsy nisakafo tany ivelany na niantsena, tsy nivory namana na namangy havana. Samy hafa be tamin'ny teo aloha！ Misaotra an'i Chin ...
2020 dia taona mahavokatra ho an'ny Stamina, tsara vintana
Vita ara-potoana ny tetikasa lehibe avy any Aostralia, manao ny asan'ny fivondronan'izy ireo izao ny mpanjifanay. Nanangana tetik'asa vaovao mitovy amintsika izy ireo, tsy isalasalana, andro vitsivitsy lasa izay, tsy miresaka resaka ara-teknika amintsika akory izy ireo fa manipy anay ireo sary fotsiny. Amponga ihany koa io, fa varingarina antsasaky ny, m ...